Fahaizana momba ny asa fanatanjahan-tena ITIL - ITS Tech Tech
Ny fananana taratasy fanamarinana ITIL eo ambany tànanao dia fanampiana lehibe ho an'ny asanao. Tsy manatsara fotsiny ny mety hisian'ny karazam-panantenana iray ankoatra izay manome antoka ny ampahany ambony amin'ny fikambanana. Ny fanomezana fanomezana lehibe ho an'ny resume anao dia manome fahatakarana ny tompon'andraikitra amin'ny fiantsoana ny olona amin'ny fianarana amin'ny IT Service Management.
Ny orinasam-pandraharahana tsirairay ao amin'ny tontolon'ny orinasam-pifandraisana, miaraka amin'ny tolotra manokana, dia manome ny fanohanana tsara indrindra amin'ireo mpanasoa azy ireo. Foana foana ny fitsapana ankehitriny, lehibe kokoa ny fikambanana, avo kokoa ny fitsapana atrehany eny an-tsena ary ny olona manan-danja indrindra dia ny manosika azy ireo hiady amin'ny vokatry ny fitsapana tsirairay. Ny tontolo mihazakazaka amin'ny zavatra andrasana, fikambanana ara-barotra, na kely na lehibe amin'ny farany dia mampifanaraka ny fotoana tsara sy ratsy eny an-tsena. Mba hiatrehana ireo fahasarotana rehetra dia ny fomba fiasa mahavariana indrindra amin'ny raharaham-barotra dia ny mifantoka amin'ny zava-bita mahazatra, manomboka amin'ny fanilihana ireo fepetra tena mahatsiravina. Ho an'ny fanangonana antontam-bidy misy eo amin'ny tarika Small Business dia mitodika amin'ny fahaiza-manaon'ireo fikambanana lehibe kokoa.
Mankasitraka amin'ny singa samihafa:
Ny fikambanana maro ankehitriny dia miankina amin'ny fanavaozana. Ny fiparitahana farany indrindra dia ny rafitra ITIL. Ny fomba fiasa arak'ilay rafitra ITIL dia manampy ny fikambanana iray hampiroborobo ny toe-bolany. Ny fanavaozana ny ITIL dia miafara amin'ny famokarana mahavelona azy ireo, ary avy eo dia raisiny ny tombotsoan'ny ITIL manam-pahaizana. Ny fampiofanana ITIL dia manome fampahalalana lehibe momba ny ITSM ho an'ireo kandidà, ka mahatonga azy ireo hijery akaiky bebe kokoa noho ny fikambanana iray. Ny asa an-tsitrapo ITIL dia tsy manolotra volavolan-dalàna mendrika afa-tsy ny karama, fa amin'ny fotoana iray ihany dia ampiasaina ho an'ny sehatra afaka miasa. Betsaka ny singa ara-barotra manerana ny manodidina no nanohana ny ITIL. Fikambanana toy ny Boeing, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Pfizer, Toyota, Walmart, NASA Disneyland ary maro kokoa no nandray ny ITIL. Ireo fikambanana izay mampiasa dokambarotra momba ny ITIL dia manome fahafahana ny fahafaha-manao sy ny fahamendrehan'ny fampisamboram-bola sy ny fanorenana.
Fampiofanana ITIL dia amin'ny alalan'ny kaonty rehetra toy ny fitaovana fanombantombanana izay manala ny lalana ho amin'ny hoavy mamirapiratra. Nanofa ny manam-pahaizana Fampiofanana ITIL dia mahazo mihoatra noho izay voamarina amin'ny sokajy samihafa. Izy io dia manome sakafo ho an'ny ampahany ambony sy ny fampitomboana ny olona izay miasa eo amin'ny sehatry ny serivisy. IFOR certification manatsara ny mpanolo-tsaina IT sy ny manam-pahaizana amin'ny ITSM miaraka amin'ny fahafahana manatsara ny ampahany ary maneho ny tombontsoa ho an'ireo singa ara-barotra izay tafiditra ao amin'ny fikambanana IT sy ny sampana IT.
Ireo manam-pahaizana izay mandray anjara amin'ny fitantanana ny tolotra IT, ny fitantanana ny tetik'asa, ny asa fanompoana sy ny fomba fiasa sy ny teknikan'ny serivisy dia manararaotra ny ankamaroan'ny fanamarinana ny ITIL. Ankoatra ireo Kandidà voamarina dia afaka mitady tanana amin'ny maha-mpanadihady IT mpanampy azy, mpanentana fanohanana ara-teknika, ary injeniera mpanampy. Ny fampiofanana amin'ny ITIL dia manolotra lehilahy iray hanavao ny tenany amin'ny fivoarana farany amin'ny fanavaozana ary manohana azy amin'ny fahaizana miatrika ny fahasarotana eny an-kianja.
An Fanamarinana ITIL manampy ny lehilahy hanampy ny fandrosoana amin'ny fanavaozana aorian'izany ny fanatsarana ny fepiny ho an'ny fananana asa ambony. Hatramin'ny nanombohan'ny fikambanana tao anatin'ny fotoana efa nahazatra dia nanangana ny rafitr'izy ireo tamin'ny hevitra ITIL izy ireo, tena mila an'izany izy ireo ITIL manam-pahaizana manokana. Tsy fanakorontanana milaza fa vetivety fa tsy taty aoriana, tsy azo ihodivirana amin'ny fangatahana fanavaozana tsy tapaka ny fanavaozana, Fanamarinana ITIL dia mety hiafara mazava tsara ho an'ny olona izay mikasa ny hanao ny tena manokana ao amin'ny orinasa IT.
Eto ny blôgy mifandraika amin'izany Dingana manaraka ny torolàlana momba ny fanamarinana ny ITIL
Fepetra ankapobeny momba ny ITILA - Fitarihana feno